Paul Pogba oo wali qorsheenaya in uu ku biiro kooxda Real Madrid | Warkii.com:-world news today for international news and videos from Europe, Asia, Africa, the Middle East and the Americas.
Home Ciyaaraha Paul Pogba oo wali qorsheenaya in uu ku biiro kooxda Real Madrid
Paul Pogba oo wali qorsheenaya in uu ku biiro kooxda Real Madrid
Ciyaaryahanka khadka dhexe ee Manchester United Paul Pogba ayaa lagu soo waramayaa inuu u hanqal taagayo inuu u dhaqaaqo Real Madrid xagaaga soo aadan.
28 jirkaan ayaa galay sanadkii ugu dambeeyay qandaraaskiisa Old Trafford, waxaana uu ilaa iyo haatan diidey isku daygii kooxda ee ku xirnaa heshiis cusub.
Pogba ayaa xilli ciyaareedkan ku bilaawday qaab ciyaareed wanaagsan Man United, isagoo isku diyaarinaya shan caawin oo Premier League ah labadii kulan ee ugu horreysay ololahan.
Si kastaba ha ahaatee, Marca ayaa werineysa in xiddiga heerka caalami ee dalka Faransiiska uu weli ka go’an yahay inuu u ciyaaro Real Madrid, isla markaana uu diyaar u yahay inuu bur buriyo qandaraaskiisa haddii aan loo oggolaan inuu ka tago xagaagan.
Haddii Pogba sii wado inuu diido dalabyada qandaraaska cusub markaas Man United waa inay lacag ku kasbataa xagaaga ama inta lagu jiro suuqa kala iibsiga Janaayo haddii aysan dooneynin inay ku weyso beeca xorta ah.
Pogba ayaa awoodi doona inuu ka wada hadlo heshiisyada beeca xorta ah laga bilaabo Janaayo, waxaana la sheegay inuu wakiilkiisa Mino Raiola u sheegay in Real Madrid ay tahay dookhiisa koowaad.
Xiddiga ku guuleystay Koobka Adduunka ayaa sidoo kale lala xiriiriyay inuu ku laabanayo Juventus ka dib bixitaankii Cristiano Ronaldo , ama uu u wareegi doono Paris Saint-Germain haddii Kylian Mbappe baxo.
Taa bedelkeeda, Pogba wuxuu diyaar u yahay inuu adeegsado xeelado la mid ah kuwa uu adeegsado Mbappe, kaasoo sidoo kale riixaya inuu u dhaqaaqo caasimadda Spain isagoo galay 12 -kii bilood ee ugu dambeeyay qandaraaskiisa PSG.
Previous articleDaawo: Habka yaabka leh ee Al-Shabaab ay uga dhaadhiciso dadka is-qarxiya oo lasoo bandhigay
Next articleXogta Dahsoon Dalabka Iskaashiga Milateri ee Turkigu ka diiday Ruushka
Juventus oo kula tartameysa Tottenham Hotspur saxiixa Mikkel Damsgaard